Ogige Mashup n'izu a na Mountain View, CA | Martech Zone
Izu a, enwere m nwute n’akụkụ n’oge Mashup Camp. Ọrụ ọhụrụ m na-arụ dọtara m na Mwebata na ndị ọzọ na njikwa ngwaahịa. N'afọ gara aga, agara m Mashup Camp nke mbụ na-eme kwa afọ wee wulite ụfọdụ ndị ọbụbụenyi na ndị nwere ọgụgụ isi nke wuru mmemme ahụ. N'ezie, ana m anabata weebụsaịtị nke Mashup Camp ma wepụta akara ngosi ha na-eji afọ a.
Ga n'ogige ndị a, otu ihe sitere n'ike mmụọ nsọ na ikike ịzụ ahịa nke anakọtara n'otu ụlọ ahụ. Ndị a bụ ụmụ okorobịa na-agbanye teknụzụ na njedebe ya, na-ewu njikọ dị egwu dị egwu n'etiti ọrụ na ngwa dị iche iche, asụsụ, na ụkpụrụ ụlọ. Offọdụ demos ị na-ahụ kpamkpam ga-agbafu gị.
Na-arụ ọrụ maka ihe API onye na-eweta ọrụ, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ karịa n'ihi na ị rụpụtara atụmatụ maka mmadụ iji, mana echeghị na ndị folks ga-etinye teknụzụ gị na ngwaahịa ha mepụtara ụzọ ha nwere.
Ọ bụrụ na ịnọ na Mountain View, CA, n'izu a ma kagbuo egwuregwu golf gị ma gaa Mashup Camp. Ọ bụ enweghị nkwekọrịta ga-ahapụ gị otu nde echiche banyere otu ị ga-esi gbasaa onyinye ngwaahịa gị. Gwa m David Berlind maka m (mgbe o nwetara ohere iji nweta ume ya!). David bụ ihe dị mkpa n'ịdọpụ nnukwu ihe omume a ma nwee mkpịsị aka ya na Mashup pulse.
Chọrọ ka m nọrọ ebe ahụ!
Tags: david berlindmashup mara ụlọikwuuugwu lee anya